Efa eto an-tanindrazana, hatry ny afakomaly, ny filohan’ny Tetezamita, Rajoelina Andry. Voalaza fa mandalo fotsiny ihany ny tenany amin’izao diany eto izao ary tsy haharitra ela izany. Etsy andaniny, nisafidy ny tsy haneho hevitra manoloana izao raharaham-pirenena izao ity mpanorina ny TGV sy ny Mapar ity. Anisan’izany ny fifidianana loholona farany teo sy ny resaka politika.
Nitondra fanambarana ny eo anivon’ny Holafitry ny mpanao gazety (OJM), omaly, manoloana ny tranga niseho tato ho ato momba ny asa fanaovan-gazety. « Samy saropady ny asan’ny mpanao gazety sy ny mpitsara nefa fototry ny fitondrana fanjakana tsara tantana… Efa nisy ny fanitsiana ny vaovao nambaran’ny mpitsara fa diso, taorian’ny dinika teo amin’ny SMM sy ny OJM », hoy ny fanambarana. Mangataka ny hisokafan’ny loharanom-baovao koa anefa ny mpanao gazety, hisorohana ny tsaho, indrindra fa mahakasika ain’olona. Tsy tokony hatao safo bemantsina koa ny mpanao gazety, araka ny fanambarana ihany.
Une réponse à "Fantina sy fintina"
Mandinika 19/01/2016 à 03:01
Efa tsy mendrika azy intsony ny fako sy ny tondra-drano ka aiza moa izy no hotamàna? Dia hatao ahoana ny hifidy olona tsy tamana eto izany? Matoa izy tsy tamana dia tsy tiany izany ny tanàna e! Raha lazaina @ fomba hafa dia hoe, ny olona mijaly, miady @ fiainana an-davanandro fa ny azy ny vola, omena ny any ivelany… asa…